Inkxaso yeNdlela yokuBuyisa - Shenzhen HONGSBELT
Buyela Way Rollers
Indlela yokubuya yenkxaso ye-HONGSBELT yakhiwe ukusuka kumphezulu webhanti, nceda uqaphele ubude be-sag, ukugcinwa koxinzelelo lwebhanti kunye nezinye izinto. Isenokwamkela iirola zokuxhasa indlela yokubuya.
Xa uthatha i-rollers yenkxaso yendlela yokubuyisela, i-ball bearing rollers iya kuba yinto efanelekileyo yokukhetha kwesi sicelo. Nceda ujonge lo mfanekiso ungezantsi. Iinjongo zokusebenzisa i-ball baring rollers ikakhulu ukunciphisa i-friction factor ye-tension ngendlela yokubuyisela.
Nceda uqaphele uhlobo lwemodyuli yebhanti yokuthutha, khetha i-diameter ye-roller efanelekileyo ukunqanda ukuphambuka okubandakanya i-angle ibe nkulu kakhulu kwaye yenze i-engile egobileyo; oko kunokubangela ukungcangcazela kwebhanti ebaleka ngendlela yokubuyisela. Ukuba ibhanti lokuhambisa alidibani nenqwelomoya okanye oonogada abasecaleni, sicebisa ukuba uthathe iirola ezithwele ibhola njengenkxaso yendlela yokubuya.
Ubuncinci boMda weDiameter yoMda weReturn Way Roller
Ububanzi beRola ( min. ) 50 mm 38 mm 50 mm 25 mm 38 mm
Kukho ubudlelwane obuvaliweyo be-engile yokuphambuka kunye ne-catenary sag; Nceda ujonge kuyilo lobalulo lobude bebhanti kunye noxinzelelo.
I-Return Way Rails
Uyilo lwendlela yokubuyisela iileyili ezixhasayo zikwabambe ukusuka kumphezulu webhanti wendlela exhasayo njengoko umboniso ubonisa ngezantsi (inkxaso yebhanti nge-engile imilo yesilayidi strip). Ngokugcina isithuba kwimiphetho yebhanti esecaleni yokuxhasa, umcu wesilayidi eyona nxalenye yoyilo lwebhanti yendlela yokubuya. kuba inokuxhasa kuphela emaphethelweni ebhanti, ukhathalelo kufuneka luthathe ubunzima kunye nezitena ezidityanisiweyo zebhanti, kunokubonakala ikhefu phakathi konxibelelwano lwemodyuli ebangela ukuba ibhanti lokuhambisa lizike xa ibhanti likuyilo olubanzi ngokugqithisileyo. (jonga umfanekiso ongezantsi).
Ngoko ke, ukuba sebenzisa uyilo lomtya wesilayidi ukuxhasa kumda webhanti, sicebise ukuba ububanzi bebhanti yokuhambisa kufuneka bukhawulelwe ngaphakathi kwexabiso le-W, njengoko itheyibhile engezantsi (i-W (max) ixabiso libalwe ngokwesiseko ukusuka kwifomula yokwandiswa kwe-Thermal kunye ne-conference calculation formula. ).
Uthotho 100A 200A 200B 300 400 500
W (ubuninzi.) 600 550 500 525 300 525
Xa i-HONGSBELT ibhanti yokuhambisa ihlanganiswe kunye neenqwelo-moya kunye nabalindi becala, uyilo olusisiseko lwenkxaso yendlela yokubuyisela ngokuqhelekileyo luthintelwe ngobubanzi bebhanti kunye nesakhiwo sokuhambisa; uyilo lweentambo ezininzi zenkxaso kwindlela yokubuyisela inokufumaneka ukulungisa le ngxaki.
Ukudibaniswa kwee-roller ezixhasayo kunye ne-wearstrips kwakhona kukhetho lokuxhasa ngendlela yokubuyisela. Xa usamkela uyilo lwee-wearstrip ezininzi, nceda unikele ingqalelo kubungakanani besithuba esigcinwa kwangaphambili, ukuthintela nayiphi na impembelelo eyonakalisa ibhanti ngexesha lokusebenza.
Izinto ezibuyiswayo ze-roller kufuneka zamkele iplastiki yobunjineli efana ne-UHMW kunye ne-HDPE, okanye izinto ezine-coefficient ephantsi yokukhuhlana.
Umda wesithuba esigciniweyo-I-Ident
Ukuba ibhanti lokuhambisa i-HONGSBELT lincanyatheliswe kwiinqwelo-moya kodwa ngaphandle koonogada abasecaleni, akukho mfuneko yokuba kubekho isithintelo kumlinganiselo wokugcina isithuba kumacala omabini. Ukuba ibhanti lokuhambisa i-HONGSBELT lidityaniswe neenqwelomoya kunye noonogada abasecaleni, idimension ye-preserving spaces iya kulinganiselwa kumacala omabini. Imilinganiselo yezithuba idweliswe apha ngezantsi.
Umxhuzulane okhethekileyo weplastiki ubukhulu becala bungaphantsi kwamanzi, ngaphandle kwemathiriyeli ye-Acetal. Xa uyila i-conveyor ephantsi kwamanzi, nceda ubeke ingqalelo kwi-buoyancy phenomenon yebhanti xa isebenza emanzini. I-buoyancy inokubangela ukuba ibhanti ligxumeke kwaye limke kwiireyile ezixhasayo kumacala omabini; Isixokelelwano sokuhambisa sinokuba nokusilela ekusebenzeni, okufana nokubamba iileyili, okanye ukuqhawuka kwebhanti ngokuthe nkqo ngenxa yamandla okutsala awomeleleyo.
Ukwamkela iintonga zensimbi ezingenasici endaweni yezeplastiki zoqobo kunokusombulula iingxaki. Ibhanti inokubanjwa phantsi kobunzima beentsimbi zensimbi, kwaye inokuphucula i-deformation eyabangelwa kumandla angaphandle kunye nokushisa okuphezulu ngenxa yokuqina okuphezulu kweentsimbi ezingenasici. Unokukhetha ibhande le-HONGSBELT kwizinto ze-Acetal, umlingiswa wayo womzimba, ubunzima obuthile bukhulu kunamanzi, kunokuphucula ukuxhamla emanzini. Ngokumalunga nobukhulu bobubanzi, nceda ubhekisele kwiSahluko soKwandiswa kweNgcaciso yoYilo.
Iindlela ezininzi zokubambelela phantsi
Ukuba ububanzi bomhambisi ongaphantsi kwamanzi bugqithile kububanzi obuphezulu, nceda ujonge lo mfanekiso ungasentla.